Dagaalo u dhaxeeya ciidmaada dawladda federaalka oo kaashanaya kuwa Kenya iyo Al-shabaab oo ka bilawday gobolka Jubada Hoose. – Radio Daljir
Dagaalo u dhaxeeya ciidmaada dawladda federaalka oo kaashanaya kuwa Kenya iyo Al-shabaab oo ka bilawday gobolka Jubada Hoose.
Kismaayo,Dec,28 -Dagaal xoogan ayaa saaka ka dhacay gobolka J/Hoose kaas oo u dhexeeya Ciidamada dawladda FKMG ah ee Somaliya oo taageero ka helaaya ciidanka dawladda Kenya iyo kooxda hubeysan ee Al-Shabab.
Dagaalka saaka ayaa lagu soo waramayaa inuu ahaa mid xoogan ayna ku geeriyoodayn ugu yaraan 10 qof,kuwaasi oo ka kala tirsanaa kooxaha iska soo horjeeda.
Deegaanka Buur Gaabo ee gobolka J/Hoose oo ah goobta uu dagaalku ka dhacay ayaa waxaa ay sheegayaan wararka goobtaasi aan ka helayno in dagaalka oo xoogan laga dareemayo Buur-Gaabo oo dhacda xadka kala qeybiya Somaliya iyo Kenya.
Goob joogayaal ku sugan Buur Gaabo ayaa sheegay in hubka la isku adeegsanayo uu yahay mid culus ilaa hadana uu socdo dagaalku,dadka deegaankuna ay walaac xoogan ka muujiyeen.
Saraakiisha ciidanka dawladda FKMG Soomaliya ee ku sugan Buurgaabo oo aan isku daynay xiriir inaan la samayno ayay noo suurto gali weyday inan qardka taleefanka ku haleelno.